सिन्धुली, धरान–चतरादेखि हेटौँडासम्मको सडक निर्माण गर्ने क्रममा सिन्धुलीमा भने लामो समयदेखिको विवाद अझै हट्न सकेको छैन ।
उहाँले धरान–चतरा—हेटौँडा राजमार्ग विस्तारै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने राजमार्ग हुने भएकाले पूर्व र पश्चिमको केन्द्रबिन्दु यहाँ भई व्यापारिक केन्द्र हुने भएकाले आजैदेखि आफूलाई सघाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “विकासका पूर्वाधार पनि पाउने भएकाले विकासको विरोधभन्दा पनि रचनात्मक तवरले सहयोग गर्न मेरो आग्रह छ । यस कार्यमा तपाईले गाली गरे पनि तपाँईका छोरानातिले धन्यवाद दिनेछन्, सिन्धुलीको नमूना शहर यहाँ म बनाइदिन्छु, तर राजमार्गको विस्तारमा विरोध नगर्नुस् ।”
यस्तै, प्रदेश सांसद विनोदकुमार खड्काले आत्तिएर नास हुने भो भनी विरोध र धर्ना जुलुस गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो । यस क्षेत्रको विकासका लागि आफूहरु अहोरात्र लागि पर्ने तर तपाईहरु विरोध गर्ने हँुदा कसरी विकास हुन्छ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
कम क्षतिमा बढी लाभ हुने हेतुले यस्तो निर्णय भएको भन्दै अस्त व्यस्त शहरीकरणले देखिएका समस्या हल गर्न आफू लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
समयमा उचित ध्यान नदिने पछि पछुताउने परिपाटी रहेको भन्दै धरान–चतरा—हेटौँडा राजमार्ग र शहरीकरणको अवधारणाले यहाँको मुहार फेर्ने भएकाले आफूहरुलाई भाग्यमानी ठानी राजमार्गको निर्माणमा अवरोध नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख ०४, २०७५०८:५४
बिजेता भएको १ साता नबित्दै रबि ओडमाथि ठुलो बज्रपात!
नेविसंघका थप ४५ जना केन्द्रीय सदस्यले राजीनामा दिएपछि नेतृत्व संकटमा !
चिनियाँ सामग्री नेपाल भित्रिँदै
उडिरहेको विमानको इन्जिन फेल भएपछी पाइलटले गरे सडकमै ल्याण्ड !
ट्रिपरको ठक्करबाट खड्काको मृत्यु